Vin नम्बर खोज
तपाईं कार वा ट्रक मा Vin नम्बर तपाईं वाहन पहिचान गर्न प्रयोग वर्ण को बस एक गुच्छा भन्दा बढी छ भनेर थाह थियो. तपाईंको VIN नम्बर छ 17 तपाईं वा खरीद विचार छन् कि कारमा अद्वितीय छन् कि पत्र र संख्या को माथि गरे अंक. एक VIN नम्बर लुकअप गरेर तपाईंले फिर्ता वाहन ट्रेस कहाँ र गर्न सक्छ निर्मित र धेरै अधिक महत्त्वपूर्ण जानकारी थियो.
आफ्नो कार मा आफ्नो VIN नम्बर मानिसहरूलाई एक औंला मुद्रण जस्तै छ, कुनै दुई कार नै एक छ. तपाईं आफ्नो कार संयुक्त राज्य अमेरिका मा यहाँ छ तापनि यो मेक्सिको मा गरिएको हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउन छक्क हुन सक्छ, क्यानाडा वा शायद यो पनि जापान देखि सबै बाटो पठाइएको, जर्मनी, कोरिया वा संसारका अन्य धेरै देशहरूमा.
तपाईं एक VIN नम्बर चलान गर्दा (पनि एक ओटो इतिहास रिपोर्ट रूपमा थाह) कार निर्माण भएको थियो जहाँ तपाईं वास्तवमा VIN नम्बर डिकोड र तिमीहरूलाई भन्नेछु उपयोग गर्दै छन् प्रदायक, जसले निर्माता छ, यो मार्गदर्शन वा शक्ति Windows र ताले छ कि वा छैन, इन्जिन आकार र प्रसारण को के प्रकार. पनि, तपाईं एक VIN नम्बर लुकअप चलान गर्दा पनि यस्तो मालिकको बीच ओडोमिटर रीडिंग रूपमा अधिक जानकारी बाहिर, कार कहिल्यै चोरी भएको छ कि छैन वा छैन, वाहन कहिल्यै बाढी मा भएको र क्षति भोगे छ भने, र विशिष्ट वाहन सम्बन्धित कुनै पनि वर्तमान सम्झन्छन् छन् भने. कार मा एक लियन छ भने तपाईं पनि बाहिर, यो कहिल्यै repossessed गरिएको छ भने, वा यो कहिल्यै एक बीमा कम्पनी द्वारा कुल हानि भएको छ भने.
मेरो Vin नम्बर जाँच
त्यसैले अब तपाईं आफैलाई सोधेर हुन सक्छ “कसरी म मेरो VIN नम्बर जाँच गर्छन्”? खुसीको इन्टरनेटमा संग, यो एकदम सजिलो छ. पहिलो कदम प्राप्त गर्न छ VIN नम्बर वाहन को. सबै कार र ट्रक तपाईं गाडीको अगाडीको शिशा को सामने माध्यम देख द्वारा देख्न सक्छौं कि चालक पक्ष मा ड्यास मा धातु को एक सानो टुक्रा मा imprinted को VIN छ. साथै, केही निर्माताहरु पनि ढोका को भित्र मा VIN नम्बर राख्न, यो हुड अन्तर्गत र कहिलेकाहीं पनि डेक बिर्को वा ट्रंक मा. एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी: तपाईं VIN संख्या नै छैनन् भनेर प्यानल को एक जोडी मा याद सक्छ. यो जरूरी वाहन चोरी हुन्छ भन्ने होइन. यो एउटा दुर्घटना भएको हुन सक्छ र केवल प्रयोग भागहरु लागि अनुमति बीमा कम्पनी सट्टा ब्रान्ड नयाँ व्यक्तिहरूलाई को कार मा राखिएको. तथापि, तपाईं एक वाहन भर आउन गर्छन् र यो सबै प्यानल मा सबै विभिन्न VIN संख्या छ भने, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त कि विशेष वाहन देखि दूर रहन छ.
अर्को यो आफ्नो कम्प्युटरमा जा र अनलाइन जा जस्तै सरल छ. एक वाहन VIN चेक प्रदान धेरै प्रतिष्ठित कम्पनीहरु छन्. Youtrust एक VIN नम्बर जाँच सेवा पाउन वा आफ्नो मित्र सिफारिस र बस उपयुक्त बाकसमा VIN नम्बर प्रविष्ट, यो कि सजिलो छ. यो बिल्कुल मुक्त VIN जाँच सामान्यतया यो निर्माता देखि आए वाहन र उपकरण बारेमा जानकारी प्रदान decoders Vin छन्.
तपाईं एक मुक्त VIN नम्बर खोज गर्न भने जो वर्ष तिमीलाई देखाउने, मोडेल र इन्जिन र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी र बनाउन, तपाईं गम्भीर यांत्रिक मुद्दाहरू प्रकट हुनेछ जो पूर्ण वाहन इतिहास प्रतिवेदन जारी गर्न सक्छन्, ओडोमिटर समस्या, कार र यति निस्कने एक दुर्घटना भएको छ भने.
यो VIN नम्बर जाँच गरेर, यो तपाईं समय को धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ, टाउको दुखाइ र शोक. यो आफ्नो प्रयोग कार बिक्री गर्न आउँदा मानिसहरू सधैं सत्य छैन. एक VIN नम्बर जाँच गरेर, यो राम्रो तपाईं सेवा गर्नेछन् भन्ने एक कार भएको बीच संसारमा सबै फरक बनाउन सक्छ, या तपाईं एक सानो भाग्य लागत र तपाईं हटाउनु सक्छ इच्छा कि भनेर एक कार भएको.
खोज्नुहोस् सस्ता सवारी साधन इतिहास रिपोर्ट यहाँ